Daacish iyo Al-Shabaab oo ka cararay saldhigyadooda | KEYDMEDIA ONLINE
Daacish iyo Al-Shabaab oo ka cararay saldhigyadooda
Boosaaso ayay canshuurta ka qaadaan iyagoo ku sugan buuraha Galgala iyo Calmadow ee gobolka Bari.
BOOSAASO, Soomaaliya - Kooxaha argagaxisadda Al-Shabaab iyo Daacish ayaa isaga cararay dhowr saldhig oo ay ku lahaayeen duleedka magaaladda Boosaaso, ee xarunta gobolka Bari.
Wasiirka Amniga Puntland, Cabdisamad Gallan ayaa xaqiijiyay in dharbaaxo culus ay ku dhacday Al-Shabaab iyo Daacish kadib markii lagu jebiyay dagaal ka dhacay Galgala iyo Calmadow labadii maalmood ee ugu dambeeyay.
Wuxuu intaasi ku daray inay Ciidanka Puntland ay la wareegeen saldhigyo ku yaallay Sugul, Ceel-gobaad, Dhashaabo, Majiyahan, Maraje, Ceel-dibir iyo degaano kale oo dhamaantooda hadda lagu soo celiyay gacanta maamulka Deni.
Wasiirka ayaa sheegay in howlgallada ay sii socon doonaan inta labadan Koox laga sifeynayo dhamaan goobaha ay uga sugan yihiin buuraha gobolka Bari, oo mudo sanado badan ay ka dagaalamayeen, kuna tababari jireen dagaalyahanno.
Wasiir Gallan ayaa lagu weeraray miino lala eegtay Kolonyo uu la socday duleedka Bali-dhidin, oo isla Bari katirsan, waxaana halkaasi lagu dilay dhowr askari oo ilaaladiisa kamid ahaa, iyadoo kuwa kale ay ku dhaawacmeen bishii lasoo dhaafay.
Puntland ayaa wajahaysa khatarta amni ee uga imaanaysa Al-Shabaab iyo Daacish, oo 2015 uu Buuraha Golisk ku aas-aasay kadib markii uu kasoo baxay Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida xiligii Axmed Godane.